I-lipoic acid - izinyathelo eziphikisanayo
Ukufaneleka Ukudla okunempilo
Ukuze usebenze ngendlela evamile yomzimba wonke, kubalulekile ukufaka i-lipoic acid ekudleni kwakho. Kungathathwa ngendlela yamathebulethi, noma kungathathwa kumikhiqizo. Ngokuvamile, kuyilungiselelo lamathebhulethi eligcwala izinga lansuku zonke. I- lipoic acid ne-contraindications, lapho kufanele kuthathwe ngokuqapha okukhulu.
Izici ze-lipoic acid
I-lipoic acid ingenye ye-antioxidants enamandla kunayo yonke eyenza ukwenziwa kwamanye ama-antioxidants futhi ilwa nama-radicals mahhala. Iyakwazi ukukhiqizwa emzimbeni womuntu, ngaphandle uma kungekho izifo. Ungayithola kwimikhiqizo enjengokuthi:
ubisi nemikhiqizo yobisi omuncu;
Ngaphezu kwalokho, ungathenga amaphilisi noma ama-capsules ngalesi sici. Ngokuvamile kunqunywe izifo zesibindi, i-atherosclerosis.
I-Contraindications i-Alpha lipoic acid
Ingabe i-lipoic acid iyingozi nokuthi ingabe imiphumela emibi ingenzeka uma iqedile? Kumele kuthiwa angeke kuthathwe uma kungezwani ukungaboni ngaso sonke isikhathi, kanye nalapho kwenzeka ukuphikisa. Ukulimaza i-lipoic acid kungabangela futhi kudlulele ngokweqile. Kulesi simo, kunobuthakathaka, ubuhlungu obufisayo, ukuhlanza nokuphuza. Ngokuvamile kukhona ikhanda eliphikisanayo. With izimpawu ezinjalo, kufanele ubone udokotela. Ngesikhathi ukhulelwe futhi ngesikhathi sokudla, sebenzisa ngokungeziwe kufanele kuthathwe ngokuqapha. Zonke izinsolo eziphikisanayo ze-lipoevoj acids kufanele zibhekwe njengokungokoqobo, ngakho-ke kungcono, uma kuzobekwa kuphela udokotela oya khona.
Kufanelekile ukunaka iqiniso lokuthi ukwamukelwa ngesikhathi esifanayo kwe-lipoic acid nokuphuza utshwala kuphelelisa ngokuphelele le antioxidant , ngakho-ke ekusetshenzisweni kwanoma yikuphi ukuphuza utshwala kufanele kulahlwe.
Ukuhlafuna i-gum - ingozi noma inzuzo?
Isidlo sasekuseni se-fat-fat
Ukondleka kokulahlekelwa isisindo ekuqeqesheni
Izinsuku ngokulahlekelwa isisindo
Inhliziyo yenkukhu - kuhle nokubi
Ubisi oluncibilikisiwe luhle futhi lubi
I-anyanisi eluhlaza okwesibhakabhaka - okuhle nokubi
Imikhiqizo equkethe i-vitamin B12
Inhlanzi yobisi - okuhle nokubi
Iyini ukusetshenziswa kwamavithamini?
Imikhumbi - izakhiwo eziwusizo
Yini ongayidla kwasekuseni?
Izingubo ezimfishane ezimfushane
Yini okufanele ugqoke amabhulukwe amhlophe abesifazane?
I-Free Free e-Finland
UJoan Collins ubiza ngokuthi "ukushona" amagama endodana yakhe, owamangalela ubaba wakhe
Izikhwama zamantombazane asebasha
Ifenisha - i-console
I-carcinophobia - indlela yokuqeda ukwesaba umdlavuza?
Imibukiso yemvelo kanye nempahla ka Karelia
I-Teaser Yokunciphisa I-Monastic
I-CT angiography - umbono wamanje wezikebhe ezisuka ngaphakathi
Utamatisi omisiwe oshiswa ngelanga - izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zokudla okumnandi kwe-Italy
I-scythe 4 imicu enebhebhoni
UKaitlin Jenner waya ukukhetha ingubo yomshado
Isibindi sezinongo ezishisayo
Umkhuhlane we-Purulent - ukwelashwa ekhaya